IOS 15 iyo iPadOS 15: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u cusboonaysiiso | Wararka IPhone
Miguel Hernández | 20/09/2021 18:55 | macruufka, macruufka 15, iPhone, Casharrada iyo buugaagta
Shirkadda Cupertino ayaa ka digtay inta lagu gudajiray Keynote -kii ugu dambeeyay oo ay ka mid yihiin waxyaabo kale oo aan ku aragnay bilowga iPhone -ka cusub ee 13 ee imaanshaha nidaamka hawlgalka mobilada ee labada iPhone iyo iPad labadaba, sida iska cad waxaan ka hadlaynaa macruufka 15 iyo iPadOS 15.
Noocyadii ugu dambeeyay ee macruufka iyo iPadOS waxay la yimaadaan waxoogaa astaamo cusub ah waxayna hadda diyaar u yihiin inay soo dejiyaan oo rakibaan. Waxaan fursaddan u qaadanaynaa inaan ku xusuusinno muhiimadda ay leedahay in aaladahayaga mar walba la cusbooneysiiyo si loo ilaaliyo asturnaantooda loona ilaaliyo nooc kasta oo furin ah. Haddii aad sugaysay macruufka 15, waa waqtigii la boodin lahaa.
1 Dhamaan wararka ku jira iOS 15
1.1 FaceTime iyo SharePlay
1.2 Safari oo la dayactiray oo muran dhaliyay
1.3 Khariidadaha iyo cimilada ayaa dib loo habeeyay
1.4 Habka foojignaanta iyo iftiin caqli leh
1.5 Warar kale oo yar
2 Dhammaan wararka ku jira iPadOS 15
3 Qalab noocee ah ayaa u cusboonaysiin doona macruufka 15 iyo iPadOS15?
4 Sida loo cusbooneysiiyo iOS 15
Dhamaan wararka ku jira iOS 15
Marka hore waxaan eegeynaa waxa ay yihiin wararkaasi waxay martigelisaa macruufka 15, nidaam lagu dhaleeceeyay ad lalabinta in uusan ahayn mid ku filan hal -abuurnimo, laakiin noo xaqiijinaya xasillooni badan, amni iyo turxaan bixin.
FaceTime iyo SharePlay
Marka laga hadlayo FaceTime, mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ayaa imanaya, Hadda nidaamka wicitaanka fiidiyaha Apple ee adeegsadayaashu aad u qaddariyaan ayaa kuu oggolaanaya inaad dhaqaajiso a qaabka sawirka taas oo khalkhal gelin doonta asalka wicitaanka iyada oo loo marayo software, iyada oo xoogga la saarayo qofka, sida codsiyada kale ee la midka ahi sameeyaan. Intaa waxaa sii dheer, maqalka baaxadda leh waxaa lagu daraa wicitaannada FaceTima, in kasta oo arjiga dhabta ahi weli yahay mid si sax ah loogu yaqaan arrintan.
Awoodda lagu daro aaladaha tufaax ma aha si aad ugu wacdo xiriirinta.
Qeyb ahaan SharePlay waa nidaam cusub oo noo oggolaan doona inaan la wadaagno waxyaabaha maqalka ah waqtiga dhabta ah sida muusigga Apple Music, taxane ama filimaan ka socda adeegyo xiriir la leh sida Disney +, TikTok iyo Twitch. Sidan, waxaad ku wadaagi kartaa shaashaddaada FaceTime ama waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabahaan si isku mid ah.
Safari oo la dayactiray oo muran dhaliyay
Shirkadda Cupertino waxay ku billowday dib -u -habayn ballaaran oo Safari ah taas oo lagu hagaajiyay baasaskii. Hadda waxaa naloo oggolaan doonaa inaan samayno taxane sabbayn oo taxane ah sida ka dhacaysay iPadka. Qaar ka mid ah isbeddeladaan waxaa laga yaabaa inuu doorto adeegsaduhu si uusan u qarin waayo -aragnimada, iyo sidoo kale inuu ku daro khariidado taxane ah iyo gaagaaban.
Cusboonaysiintaan Safari waxay keentay cabashooyin badan oo ka yimid falanqeeyayaasha, sidaa darteed Apple waxay go'aansatay inay dib u habeyn ku sameyso nidaamka iyada oo la marayo betas.
Khariidadaha iyo cimilada ayaa dib loo habeeyay
Codsiga Khariidadaha Apple waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan inay xoogaa tartan siiyaan Khariidadaha Google, hadda waxay bixin doontaa xog badan oo mashiinka raadinta ah waxaana lagu darayaa wax ku saabsan haadka iyo tilmaamahooda.
Si la mid ah barnaamijka cimilada wuxuu ku dari doonaa matalaad garaafyo cusub ku saabsan isbedelka cimilada iyo xaaladaha deegaanka. Nidaamka wargelinta digniinta roobka ayaa sidoo kale dib loo habeeyay.
Habka foojignaanta iyo iftiin caqli leh
El Habka xoojinta Waxay kuu oggolaan doontaa inaad dejiso ogeysiisyada iyo codsiyada si wax ku ool ah si aysan na dhexgalin. Waxay u timaaddaa inay u malayso nooc sare oo faylka ah Ha dhibin hab in isticmaaleyaal badan ay dalbadeen saacadaha dheer ee isgaarsiinta.
Isticmaalayaasha ayaa awood u yeelan doona inay gacanta ku hagaajiyaan sida ay jecel yihiin ama ku dhegaan shirkadda Cupertino ee hore loo sii diyaariyey. Sidaas si la mid ah, Spotlight ayaa hadda noo oggolaan doonta inaan wax ka raadinno xitaa sawirrada, annagoo isku darayna shaqadii Qoraalka Tooska ah kaas oo turjumi doona qoraalka sawirrada waqtiga dhabta ah, sidoo kale qabsan doona si aan ula wadaagno ama xitaa u nuqulno meel kasta oo aan rabno.
Warar kale oo yar
Codsiga Notas wuxuu ku darayaa kartida abuurista summadaha ururrada iyo sheegidda isticmaaleyaasha kale ee ku jira qoraallada.
Codsiga raadinta ayaa hadda kuu oggolaan doona inaad hesho aaladaha xitaa marka la damiyo.
Tab cusub oo ku jira arjiga Caafimaadka hadda waxay noo oggolaan doontaa inaan xogta la wadaagno kooxda caafimaadka iyo xasiloonida marka shaqada socodku socoto.
Dhammaan wararka ku jira iPadOS 15
Kanaalkayaga YouTube -ka waxaannu si dheer ugu sharraxnay waxa cusub ee iPadOS 15, kuwaas oo, sidaad si fiican u ogtahay, aan waxba ahayn nooc xoogaa ka sii adag oo macruufka 15 ah.
Marka hore, iPadOS 15 waxay ballaarin doontaa xajmiga iyo shaqeynta qalabka Widgets, iyaga oo geeya shaashadda weyn, sida ka dhacda macruufka 15. Sidaas si la mid ah, nidaamka ururka iyada oo loo marayo maktabadda arjiga laga dhaxlay iPhone waxay sidoo kale u timaaddaa iPad -ka, iyadoo si joogto ah ugu jirta aagga ugu daran ee gaagaaban.
Isku -darka inta kale sida cusboonaysiinta arjiga Notas sidoo kale waxay yimaadaan iPad -ka, sidaa darteed asal ahaan waxaan yeelan doonnaa war intaas ka badan ama ka yar intii ku jiray IOS 15, dhinac si aad ah u dhaleeceeyay falanqeeyayaasha qaarkood oo wax badan ka filaya nidaamka hawlgalka iPad -ka.
Qalab noocee ah ayaa u cusboonaysiin doona macruufka 15 iyo iPadOS15?
Xaaladda iOS 15 Liisku waa ku dhawaad ​​dhammaad la'aan, marka lagu daro iPhone 13 oo imaan doonta laga bilaabo Sebtember 24 ee soo socota:
Dhinaca kale, iPadOS 15 ayaa imanaya:
Sida loo cusbooneysiiyo iOS 15
Waxaad dooran kartaa dariiqa dhaqameedka, cusboonaysiinta OTA waxay u baahan doontaa oo keliya tallaabooyinka soo socda:
Fur arjiga goobaha oo taga qaybta Guud.
Gudaha General dooro ikhtiyaar Cusbooneysiinta barnaamijka.
Sii wad soo dejinta oo si otomaatig ah ayey u rakibi doontaa.
Hadaad doorbido waxaad ku rakibi kartaa macruufka 15 gabi ahaanba si nadiif ah si looga fogaado nooc kasta oo khaladaad ah oo looga faa'iidaysto samaynta a dayactirka aad iPhone.
Waxaad raaci kartaa talaabooyin yaryar oo sahlan oo aan kaaga tagnay maqaalkeena ee Actualidad iPhone oo ku saabsan waxyaabaha cusub. Tani gabi ahaanba waa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iOS 15, hadda waa waqtigii la cusbooneysiin lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » IOS 15 iyo iPadOS 15 ayaa halkan jooga, tani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan cusboonaysiin
Ka dib markii la cusbooneysiiyay, waxaan ku arkaa buufinta gaduudan goobaha "kaydinta iPhone waxay ku dhowdahay buuxin", laakiin waan siiyaa mana soo gasho, waxay ahaanaysaa sidii hore. Waxaan tirtiray ku dhawaad ​​50GB, waxaan haystaa boos bannaan. Waxaan dib u bilaabay, oo waxba ma jiraan, weli waa jirtaa oo haddaan jeexjeexo, iima jeedin, mana tagto. Xal kasta oo aan ahayn soo celinta? Mahadsanid
Ka jawaab Medusa